Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị na-egwu bọọlụ Zambia Enock Mwepu Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Anyị Enock Mwepu Biography na -egosi Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, ndụ nwata, ezinụlọ, ụdị ndụ, nne na nna (Robby na Emmalle), nwunye (Matilda), na nwanne (Francisco). Karịa nke ahụ, ọnụ ahịa Enock's Net Worth, na Ndụ Onwe.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na -ewetara gị njem ndụ nke onye ọkpọ egwuregwu, site na mmalite ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị, nke a bụ oge ọ bụ nwata ruo na ebe ngosipụta okenye - nchịkọta zuru oke nke Enock Mwepu Bio.
Akụkọ ndụ Enock Mwepu. Lee ndụ ya na akụkọ ịrị elu ya.
Ee, onye ọ bụla maara maka ntụgharị ya nke mere ka ọ bụrụ onye na -egwu egwuregwu bọọlụ.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị ndị egwuregwu bọọlụ ole na ole gụchara ihe ncheta ya nkenke, nke anyị ga -ekpughere n'otu ntabi anya. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Enock Mwepu Akụkọ nwata:
Maka ndị na -anụ akụkọ ndụ ya, ọ na -ebu aha otutu 'Kọmputa'. Enock Mwepu mụrụ na 1st ụbọchị nke Jenụwarị 1998 na nna ya, Robby Mwepu, na nne ya, Emmalle Mwepu, na Lusaka, Zambia.
Onye na -egwuri egwu bụ otu n'ime ụmụaka isii amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
Zute nne ya, Emmalle Mwepu, na nna, Robby Mwepu. N'ezie, ha nwere mpako na ha nwere nwa nwoke dịka ya.
Ọ bụ ihe nwute, na nwata Mwepu abụghị nke rosy. Ahụmahụ ya mgbe ọ na -etolite dị njọ dị ka nke ahụ Sadio Mane. Ọ bụ ihe na -akụda mmụọ na nwata nwoke ahụ na ụmụnne ya ejighị n'aka nri ọzọ ha nwere.
Ha nwere ike jiri naanị otu nri gaa otu ụbọchị - ọnọdụ a na -ahụkarị n'ọtụtụ ezinụlọ ndị ọzọ na mba ya.
N'ịchọ ịgbapụ n'echiche ịda ogbenye, Mwepu na ndị enyi ya na -etinye oge ka ukwuu n'ọhịa. Na -enweghị uwe elu na akpụkpọ ụkwụ efu, ụmụaka na agụụ na -agụ na -asọrịta mpi n'etiti onwe ha na egwuregwu bọọlụ ruo mgbede.
Ka ha na -alọta ụlọ, naanị ihe ha ga -eme bụ iri naanị nri ha ma hie ụra.
Ka o riri oge ya n'egwuregwu bọọlụ, onyinye na -eto eto na -ebikọkwa n'etiti ụmụnne ya. A zụlitere ya na ụmụnne ya nwoke 3 na ụmụnne nwanyị 2 na ebe amụrụ ya.
Agbanyeghị, ezinụlọ ya anọghị na Lusaka ogologo oge tupu ha akwaga n'obodo nta Chambishi na Kalulushi. Dị ka ọ na -adị, Mwepu chọtara oghere kacha nso dị n'ụlọ ya ma sonyere ụmụ nwoke ndị ọzọ maka ọzụzụ ha mgbe niile.
Ezinụlọ Ezinụlọ Enock Mwepu:
Mgbe nna ya nwere ihu ọma nwetara ọrụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ na-egwupụta ọla kọpa, ezinụlọ ya hụrụ olile anya ibi ndụ nkezi. Tupu ebuli ọnọdụ ego ha elu, ezinụlọ Mwepu na -agbasi mbọ ike ịkpata ihe ha ga -eri.
Ndị mụrụ ya bụ ndị ọrụ ugbo na -enweghị ezigbo ego iji kwado ezinụlọ ha tupu ha esi na Lusaka kwaga. Mgbe ọ na -ekwu maka akụkọ ndụ ya, onye ọkpọ ahụ kpughere etu ezinaụlọ ya dara ogbenye si kpalie ya ịgba mbọ maka ihe ịga nke ọma.
Enock Mwepu Origin Family:
Amụrụ ya na isi obodo Lusaka mere ka ọ mata oke mmepeanya. Dị ka onye mba Zambia, Mwepu na -anya isi na omenala obodo ya na ọtụtụ anụ ọhịa bara ụba.
Ị maara?… Ebe o si (Lusaka) bụ otu n'ime obodo na -emepe emepe ngwa ngwa na ndịda Afrịka. N'ezie, obodo ya na -anabata ma ụlọ ọrụ gọọmentị na nke azụmahịa nke obodo a.
Maapụ ahụ na -egosi ebe ebe ọ si bịa.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị agbụrụ Afrịka na -ata ahụhụ site na ịkpa oke gburugburu ụwa, Mwepu anaghị eme ihere ịmata ụdị onye ọ bụ.
Dabere na ezinụlọ ya, ndị obodo nwere asụsụ dị iche iche na Nyanja (Chewa) na -asụkarị.
N'agbanyeghị ọnọdụ ego na -adịghị mma nke ezinụlọ ya, onye na -eme egwuregwu ka na -aga akwụkwọ. Ọ nwere ike ọ gara ụlọ akwụkwọ kacha mma, mana opekata mpe, ọ gụrụ akwụkwọ. Na agbanyeghị, Mwepu ekpughepụtaghị aha ụlọ akwụkwọ ọ gara ruo taa.
Enock Mwepu Biography - Akụkọ bọọlụ:
Dịka m kwuru na mbụ, kọmpụta ahụ malitere njem bọọlụ ya n'ihi oke agụụ maka egwuregwu ahụ. Laa azụ n'oge ahụ, o gosipụtara agwa nke naanị ụmụaka ole na ole nwere.
Ndị lere ya na -eme ụfọdụ aghụghọ na nka maara na ọ nwere ike ịbụ onye na -esote Jay-Jay Okocha. Ewezuga inye ya olile anya maka ọdịnihu ka mma, bọọlụ nyeere Mwepu aka n'ọrịa site na ụdị ndụ ọtụtụ ụmụ amaala na -eto eto.
Ọ bụrụ na ị na -egwu bọọlụ ụbọchị niile, ị ga -ezere ajọ ị circleụ ọgwụ ọjọọ na ị smokingụ wii wii.
N'ezie, mgbe ọzụzụ gachara, ike ga -agwụ gị kpamkpam wee daa n'ihe ndina na mgbede.
Ihe mere ka ọ bụrụ naanị ihe ntụrụndụ na ihe a na -eme kwa ụbọchị mepere ụzọ maka mmeri mbụ ya. Naanị mgbe ọ dị afọ 14, Mwepu na enyi ya Changwe Kalele etinyelarị egwuregwu ha n'etiti ụmụaka ndị ọzọ nọ n'òtù obodo ha.
Enock Mwepu Bio - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ọ dabara na ọ ga -adịrị ya, talent ha, nke kpọrọ ha site na ụmụaka ndị ọzọ, dọọrọ mmasị Lee Kawanu. Ọ dabara na, Kawanu nọ na-achụ nta maka ụmụ nwoke ga-eso ya zụlite usoro egwuregwu dabere na talent na Zambia.
Zute Kawanu, nwoke ahụ wepụrụ Mwepu site na mkpọmkpọ ebe wee bụrụ ọkachamara.
N'oge ọrụ nlegharị anya ya, ọ hụrụ ụmụaka abụọ pụrụ iche bụ ndị gbara bọọlụ ahụ n'ụzọ dị iche. Ha bụ Mwepu na Changwe. N'enweghi obi abụọ ọ bụla, scout kpọọrọ ụmụ nwoke abụọ n'okpuru nku ya.
Njem nke Ndị Enyi Abụọ:
N'ịmara nke ọma etu ohere ọhụrụ a dịruru mkpa, Mwepu soro Changwe rụsie ọrụ ike iji hụ na ha mere nke ọma. Ọ na -egosipụta dị ka Mba 10 mgbe enyi ya na -arụ ọrụ site na ọnọdụ agbachitere agbachitere dịka Mikel Obi.
Enyi ya, Changwe, na -egosipụta oke nchedo n'ọhịa.
N'oge na -adịghị anya, ndị egwu kpọrọ ya kọmputa. Nke a bụ n'ihi na Mwepu ziri ezi na ọnwụ ya wee were nke ọma gbakọọ ihe ọ ga -eme. Nrọ ya bụ ịpụta maka obodo ya n'asọmpi mba ụwa.
N'oge adịghị anya, Kawanu achịkọtala ọtụtụ ụmụaka dị njikere ịsọ mpi naanị oghere 18. N'ịbụ onye ntụzi nke Kafue Celtic, ya na otu n'ime ndị egwuregwu ya nwere onyinye - Patson daka.
Lezienụ anya na kọmpụta ahụ:
Kere ihe?… Mwepu emeworịrị onwe ya aha tupu usoro nhọpụta amalite. N'ihi ya, ndị mmadụ dọrọ Daka (onye na -eti ihe) aka na ntị ka ọ kpachara anya maka kọmpụta na -eji nkà ya kacha mma ebibi ndị egwuregwu.
Kama ihu mmechuihu, Patson zuru Mwepu oke ma ka bụrụ enyi ya. N'ihi ya, mmekọrịta enyi ha mụbara ruo atọ, ebe onye na -agafe ogologo nọ na etiti.
N'inwe nka na ọchichị, ụmụ nwoke atọ ahụ (Mwepu, Changwe, na Daka) bụcha ndị a họpụtara n'ime mmadụ iri na asatọ nke otu ndị ntorobịa Zambia.
Foto na -adịghị ahụkebe nke Mwepu na Daka n'oge ọrụ ịgba bọl mbụ ha.
Ha niile gbara egwu n'asọmpi Iko mba Afrịka U-17. Daka duuru ndị otu ahụ dịka onye isi, ebe ụmụ nwoke ndị ọzọ kwanyere ya ugwu. Agbanyeghị, ha amaghị maka ọdachi na-ada ada na ọbụbụenyi ha chiri anya.
Ọnwụ Ọdachi nke Enock Mwepu - Ihe ọghọm Ghastly:
Ọ dị nwute na egwuregwu iru eru ha na Uganda bụ Changwe ikpeazụ gbara. Ọ dabara n'ihe mberede ụgbọ ala nke mere ka ọ nọrọ n'oche nkwagharị afọ abụọ tupu ọ nwụọ.
Ilele etu Changwe si nwee obi ụtọ n'agbanyeghị ọnọdụ ọjọọ ya.
N'ezie, ihe ahụ merenụ jọgburu onwe ya, mana ndị enyi ya abụọ tụgharịrị na-akwụsi ike n'ihi oke ọkụ. Ha chọrọ imezu nrọ ya na ha.
N'ihi nke a, ụmụ nwoke abụọ ahụ gbalịsiri ike na-enyere Zambia aka ịrapara na iko mba Afrịka U-20 n'afọ 2017. Ha tinyere ahụ na mkpụrụ obi ha n'imeri iko maka asọpụrụ ezigbo enyi ha Changwe. N'ikpeazụ, Mwepu natara nwoke nke egwuregwu ahụ.
Otu n'ime oge kacha atọ ụtọ n'oge ntorobịa ya.
Enock Mwepu Biography - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
Tupu ya enweta mba ofesi, onye ọkpọ bọọlụ gbalịsiri ike inweta klọb dị mma. Mgbe ụfọdụ, ọ naghị arahụ ụra n'abalị n'ihi echiche maka ọdịmma manage ya. A chụrụ nna ya n'ọrụ, Mwepu wee bụrụ onye na -akpa afọ ezinụlọ ya.
Ọ dị mkpa ịkwaga klọb buru ibu karịa Kafue iji nweta ihe ọ ga -eri. Mgbe ya na Kawanu kwurịtara nsogbu na ọnọdụ ya maka mbufe, Mwepu kwagara Power Dynamos na 2015.
N'ebe ahụ, ọ nweghị ihe ịga nke ọma n'egwuregwu mbụ ya, ọ nweghịkwa ihe ngosi maka oge ezumike niile. N'ikpeazụ, ọ sonyeere NAPSA Stars, ebe o ji talent ya dọta ọtụtụ ndị na -eme egwuregwu.
Otu n'ime oge ya na mpaghara ọzụzụ nke NAPSA Stars,
Enock Mwepu Bio - Akụkọ ịga nke ọma:
N'oge iko mba Afrịka U-20 (na 2017), ntorobịa na-eto eto gosipụtara àgwà niile achọrọ n'asọmpi elu elu. Ọnwa isii ka enyi ya hapụsịrị Zambia gawa Europe, Mwepu jikọtara ya na Red Salzburg bịanyere aka na ya na 2017.
Ị maara?… Ogologo onye na -agafe agafe tọhapụrụ ezinụlọ ya ozugbo site na ịda ogbenye site na iji mbinye aka ya. Ọ zụtara nne na nna ya ụgbọ ala na ụlọ, butere nwanne ya nwoke nke okenye gwongworo, ma kpuchie ụgwọ kọleji nwanne ya nwanyị.
Dị ka Erling Haaland, Mwepu biliri ngwa ngwa site na ọkwa Salzburg. Ka oge na-aga, ọ ghọrọ onye isi ala ma nwee oke agụụ ruo n'ókè nke na ndị nkuzi ya kwenyesiri ike na ọ ga-ebute oke ọgbaghara n'ọdịnihu.
Isoro ndị otu egwuregwu na -eme ememme na -enye ya nnukwu obi ụtọ.
Gut Mwepu agaghị ada mbà wee kpọọ ya onye Yaya Toure pịnye na pitch. Ya na enyi ya tụgharịrị (Patson), onye na-agafe agafe ziri ezi nyere Salzburg aka imeri ọtụtụ iko.
Lee ọ joyụ ọ bụ ka ha abụọ na -emekọ ọnụ mmeri klọb ha ọnụ.
Na July 2021, ọ sonyeere klọb EPL Brighton & Hove Albion na nkwekọrịta afọ anọ a kọrọ na ọ ruru £ 18 nde. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Banyere Matilda, Enọk Mwepu Nwanyị tụgharịrị nwunye:
Echiche ịla n'ụlọ na ịnabata onye nabatara ya ma nabata ya na -eme onye na -eme egwuregwu obi ụtọ. N'ezie, Mwepu maara ihe ịhụ n'anya pụtara, maka nlekọta o nwetara n'aka enyi ya nwanyị tụgharịrị.
Ahụmahụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na enyi nwanyị ya tụgharịrị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata, aha ya bụ Matilda Mwepu. Ọzọkwa, ọ bụ otu n'ime isi ihe mere ị jiri hụ ka onye na -agba bọọlụ na -amụmụ ọnụ ọchị.
N'ụzọ na -akpali mmasị, Mwepu na Matilda dere ụbọchị ole na ole tupu ha ekpebie ịga n'ihu mmekọrịta ha. N'ihi ya, nnụnụ ịhụnanya hụrụ eriri dị ka di na nwunye na 2nd nke Jenụwarị 2021.
Oge mara mma mgbe di na nwunye kwuru ee onye ọ bụla ọzọ.
Enock Mwepu Personal Life:
Mgbe ị lere anya n'ọdịdị ya, ị ga -ahụ ihe ụfọdụ gbasara ọdịdị ya. Ihe mbu, Mwepu bụ onye dị nwayọ na -edobe ọtụtụ n'ime echiche ya.
N'agbanyeghị etu o siri sie ike megide ndị mmegide na pitch, ọdịdị ịdị nro ya na -ezuru ya mgbe niile. Ee, ọbụlagodi ịmụmụ ọnụ ọchị ya na-ezipụ ozi na ọ bụ nwoke dị mfe.
Kedu nwa amadi o bu. Ọbụna ịmụmụ ọnụ ọchị ya na-eme ka o doo anya nke ọma ụdị onye ọ bụ.
N'ihi ụdị onye ọ bụ, Mwepu anaghị agakarị ahịa mgbe ọ gara obodo ya. Ọ na -agba mbọ izere nlebara anya dị ukwuu site n'ịkpọrọ ezinụlọ ya gaa ebe dị jụụ maka ezumike.
Enock Mwepu Web Life:
Ọ na -abụkarị nrọ ya siri ike ịtọhapụ ezinụlọ ya na ịda ogbenye. Ekele maka ndụ ọhụrụ ya dị ka onye na -eme egwuregwu, Mwepu emezuola ihe ọ na -achọ site n'inye ezinụlọ ya ndụ ka mma.
N'ezie, ọ bụ onye ghọtara ihe enweghị ihe ọ pụtara. N'ihi ya, ọ gaghị ekwe ka ohere ịnụ ụtọ onwe ya gafere ya. Na ndetu a, Mwepu na -ebi ndụ okomoko nke nwere ụgbọ ala na -egbu maramara na nnukwu ụlọ.
Zọ kachasị mma iji mefu ego ya bụ site n'inweta ọmarịcha njem maka onwe ya na nwunye ya.
Ezinụlọ Enock Mwepu:
Ọ dịtụbeghị ụzọ ka mma isi lanarị ihe isi ike n'ọtụtụ mba Africa karịa ibi n'otu ụlọ. Kọmputa bụ ihe ndabara ọma inwe ezinụlọ dị otú ahụ.
Moreso, ọ daberela n'ike mkpali nne na nna ya na nwanne ya ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ na -eme nke ọma. Na ndetu a, anyị ga -agwa gị eziokwu gbasara onye ọ bụla so na ndị isi ya na ngalaba a.
Banyere Enock Mwepu Father:
Ndị nna bụ onye mbụ na -ebu ibu nke ịkpa afọ ezinụlọ. N'otu aka ahụ, nna Mwepu, Robby, agbanweela site n'otu ọrụ gaa n'ọzọ iji hụ na nwunye ya na ụmụ ya dị ndụ.
Zute nna ya, Robby Mwepu.
Nke mbụ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye ọrụ ugbo tupu ọ nweta ọrụ na ụlọ ọrụ na-egwupụta ọla kọpa. Ruo nwa oge, Robby Mwepu nyeere ezinụlọ ya aka ibi ụdị ndụ. N'ụzọ dị mwute, n'oge na -adịghị anya a chụrụ ya n'ọrụ, ọ ghaghịkwa ịlaghachi n'ọrụ ugbo.
N'ụzọ na -akpali mmasị, Robby dị iche na ọtụtụ ndị nne na nna Africa. Nkwado ya maka ọrụ Mwepu na -achụ n'ịgba bọọlụ bụ ihe dị iche na ya Didier Drogbanna ya. N'ezie, ọ na -enwe oke nganga maka ihe nwa ya rụzuru.
Banyere Enock Mwepu Nne:
Ọ bụ ezie na ndị nna na -arụ ọrụ nke ndị na -akpa afọ ezinụlọ, ndị nne bụ ndị na -ewu ụlọ, ọkachasị n'ọtụtụ mba ndị isi ojii. N'ihi ya, Mwepu enwetala ezi omume ya site na isoro nne ya nọrọ ogologo oge - Emmalle Mwepu.
Mmefu ya na nne ya, Emmalle, bụụrụ ngọzi nye onye na -eto eto na -eme egwuregwu.
Ọ bụ nwanyị na -arụsi ọrụ ike nke bụ ihe nnọchianya nke okwu nkwụsi ike. Ka oge na -aga, Emmalle na di ya na -arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na ha na -enye ụmụaka nri. N'agbanyeghị arụrụ arụ ụlọ, nne Mwepu na -aga ugbo ugboro ugboro.
Banyere Enock Mwepu Ụmụnne:
Ọ bụ ihe a na -ahụkarị itolite na Zambia na ọtụtụ ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị. N'ihi ya, a zụlitere Mwepu na ụmụnne ise ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Ha gụnyere ụmụnne nwoke atọ na ụmụnne nwanyị abụọ.
Dị ka a tụrụ anya ya, nwanne ya nwoke nke obere (Francisco) gbasoro ọrụ ịgba bọl ruo mgbe ọ ghọrọ ọkachamara. Ka m na -ede akụkọ ndụ a, atụmatụ Francisco na Australian Bundesliga maka SK Sturm.
Foto mara mma nke na -egosi etu Enock na Francisco si nwee ihe ịga nke ọma.
Cheta, anyị kwuru na akụkụ mbụ nke ncheta a na Mwepu zụtara nwanne ya nwoke nke okenye ụgbọala. Nke ahụ bụ naanị ntakịrị ihe n'ime ọtụtụ ihe o meere ndị ezinụlọ ya fọdụrụ.
Banyere Enock Mwepu Relatives:
Site n'ọkwa nke akụnụba ya na ama ama ya, o doro anya na onye ọkpọ egwuregwu bụ otu n'ime ndị kacha eme ememme na ezinụlọ ya. Agbanyeghị na ọ kpọtụghị nne na nna ya ochie ma ọ bụ nwanne nna ya na nwanne nna ya, anyị ji n'aka na ha nwere nganga maka ihe ịga nke ọma ya.
Enock Mwepu Eziokwu efu:
Mgbe ị gụchara akụkọ na-atọ ụtọ nke kọmpụta ahụ, ebe a bụ ụfọdụ ihe mere eme nke ahụ ga -enyere gị aka ịghọta akụkọ ndụ ya nke ọma.
Na -achọgharị n'ime akụkọ ndụ ya, ị ga -achọpụta na ego ọ na -enweta na -esitekarị na bọl. Ka m na -achịkọta akụkọ ndụ a, Mwepu nwere ọnụ ahịa ruru nde £ 2 (stats 2021).
Ụbọchị ya na Salzburg hụrụ ya ka ọ na -anata ụgwọ ọnwa kwa afọ nke £ 980,000. Agbanyeghị, ịkwaga Brighton & Hove Albion ga -eduga na nkwalite na ego ọ na -enweta n'ihe ruru paụnd 40,000 kwa izu.
Nyocha anyị gbasara ụgwọ ọnwa ya na -egosi na otu nwa afọ Zambia ga -arụ ọrụ afọ 28 iji mee ihe Mwepu na -enweta n'otu izu na Brighton.
Anyị ejiri akọ tinye nyocha ụgwọ ọnwa kọmpụta ka elekere na -akụ. Hụ ego ole o mere kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Enock Mwepu's Bio, nke a bụ ihe o nwetara na Brighton.
0 Zambia Kwacha (ZMK)
Enock Mwepu Salary Salzburg Ndakpọ na Zambia Kwacha (ZMK)
Kwa Afọ: 56,093,649 Zambia Kwacha (ZMK)
Ọnwa kwa: 4,674,470 Zambia Kwacha (ZMK)
Kwa Izu: 1,077,067 Zambia Kwacha (ZMK)
Kwa :bọchị: 153,866 Zambia Kwacha (ZMK)
Kwa elekere: 6,411 Zambia Kwacha (ZMK)
Nkeji nkeji: 106 Zambia Kwacha (ZMK)
Kwa Nke Abụọ: 1.78 Zambia Kwacha (ZMK)
Eziokwu #2: Ihe kpatara aha otutu:
Mgbe ọ gbasasịrị ọtụtụ ndị na-ekiri ya n'ụzọ ziri ezi dị ka igwe ya, ndị egwuregwu enweghị ike inye aka kama ịkpọ ya 'kọmputa'. N'ikpeazụ, Mwepu gara n'ihu na -eyi mpako ya na nganga.
Ọ ka mma na ngafe obi ọjọọ ya na ọgụgụ isi ya iji gbakọọ nkọwa na obere oghere na pitch. N'ezie, ọ dabara na aha otutu nke ndị egwu ya nyere ya.
Eziokwu nke 3: Okpukpe Enoch Mwepu:
Ịghọ ọkachamara n'egwuregwu bụ otu ihe maka kọmputa yana ịbụ onye okpukpe bụ ihe ọzọ. Mwepu abụwo Onye Kraịst ji okpukpe kpọrọ ihe kemgbe ọ bụ nwata. Ndụ ya dabeere n'egwuregwu, ụlọ akwụkwọ, na ụka.
Mgbe ọ na -egosi dị ka onye na -eme egwuregwu na -eto eto, onye ọkpọ egwuregwu na ndị enyi ya haziri nzukọ ekpere n'ogige. Ọtụtụ oge, Patson Daka na -eme nkwusa. N'ihi nkwenkwe okpukpe ya, Mwepu anaghị aga klọb, ọ naghị a drinkụ ma ọ bụ na -a smokeụ sịga.
Enock Mwepu dị mma nke ukwuu na mpaghara uche, mmegharị na ike. Dị ka onye na -eto eto, ọ nwere ọtụtụ ikike ọ ka ga -enyocha. Enwere olile anya, ịkwaga na Premier League nke England ga -enye ya mkpughe kachasị mma nke ga -agbago ọkwa ya.
Nyocha nke ike onye na -eme egwuregwu.
Tebụl dị n'okpuru na -ekpughe ozi dị nkenke gbasara Enoch Mwepu. Ọ na -enye gị ohere ịgagharị na profaịlụ ya ozugbo enwere ike.
Aha n'uju: Enock Mwepu
aha otutu: Kọmputa
Age: 23 afọ na ọnwa 8.
Ụbọchị ọmụmụ: Ọnwa Iri 1, 1998
Ebe amụrụ onye: Lusaka, Zambia
Nna: Robby Mwepu
Nne: Emmalle Mwepu
Ụmụnne: 3 andmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị abụọ
Enyi / Nwunye: Matilda Mwepu
Ezigbo Net: Million 1.5 million (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 980,000 (ya na Salzburg)
elu: 1.84 m (6 ụkwụ na 0 sentimita)
N'agbanyeghị ihe isi ike dị na obodo ya, Mwepu ka na -arụ ọrụ ya ruo n'ọkwa ndị egwuregwu ama ama. Ọ bụ ọkaibe nke ukwuu, ndị nyocha ahụ kpọrọ ya Nhọrọ Bissouma onye nwere ike Thomas ParteyOnye nrọ nrọ na Arsenal.
Ọ kwesịrị ka anyị nwee ekele maka ezinụlọ ya maka ịbụ isi mmalite mkpali ya na njem a. Ekele dịrị nna ya, Robby, na nne ya, Emmalle, Mwepu etoola bụrụ ezigbo nwa okorobịa a pụrụ ịtụkwasị obi.
Obi abụọ adịghị ya, nwunye ya na ụmụnne ya nwere nganga ịmata onye ọ bụ. Ọbụna ndị obodo ibe ya na -abụ abụ otuto mgbe niile maka ọrụ ọ rụzuru.
Daalụ maka ịgụ Enock Mwepu Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Anyị nwere olileanya na ọ masịrị gị. Jiri nwayọ hapụ nzaghachi maka ahụmịhe gị n'isiokwu a na ngalaba nkọwa n'okpuru.